Leonardo Bonucci “Real Madrid ayaa xagaagii hore isoo dalbatay waana diiday in aan ku biiro” – Gool FM
Leonardo Bonucci “Real Madrid ayaa xagaagii hore isoo dalbatay waana diiday in aan ku biiro”
Haaruun February 19, 2019
(Turin) 19 Feb 2019. Daafaca kooxda Juventus iyo xulka Talyaaniga Leonardo Bonucci ayaa sheegay in xagaagii hore ay soo dalbatay kooxda Real Madrid, hase yeeshee uu codsigaasi iska diiday kuna adkeystay inuu sii joogo halka uu qalbigiisu ku qanacsan yahay ee Juventus.
Bonucci ayaa sanadkii hore dib ugu soo laabtay naadigiisa Juventus kaddib markii hal xilli ciyaareed u soo dheelay AC Milan (2017-2018), waxaana Bianconeri ay ku soo ceshatay xidigagn 40 milyan oo dollar.
Si kasta oo ay ahaato Bonucci oo 31 jir ah isla markaana ku guuleystay 6 Koob oo Serie A ah oo uu la qaaday Juventus ayaa xusay inuusan marnaba ‘maya’ oran karin kooxda Juventus.
“waa dhab in aan iska diiday dalab iiga yimid Real Madrid, haa waa sidaa, Real Madrid xaggayga ayay soo eegaty, taasoo sharaf iyo wax aan ku faano ii ahayd in ay I bar tilmaameedsadaan, markii ay ii yeertay Juventus, xiisihii aan u qabay in aan dib ugu laabto ee ahaa inaan gurigaygii iyo halkii qalbigeygu jiray u laabto ayaa ahayd mid aniga ii wanaagsan” ayuu yiri Bonucci.
Xilli ciyaareedkan Bonucci waxa uu 26 kulan u dheelay Juventus dhammaan tartammada kala duwan, waxaana uu rajaynayaa in uu qayb ka noqdo laacibiinta kooxdaasi ee habeen dambe ka hor tagaya Atletico Madrid 16 dhammaadka Champions League.
Xaggee ayuu ku dambeeyaa xidiggii hore ee kooxda Manchester United Luis Nani?
Salaantii xalay ee Callum Hudson-Odoi iyo Tababare Solskjaer oo macno kale xambaarsanayd